Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-United Airlines: Fumana i-COVID-19 jab okanye ulahleke
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
United Airlines: Fumana ijab okanye ulahleke
Abasebenzi beUnited Airline abangavumiyo ukugonywa yi-COVID-19 abayi kuvunyelwa ukuba bangene emsebenzini emva komhla wesi-2 ku-Okthobha.
I-United Airlines yazisa nge-COVID-19 igunya lokugonya abasebenzi.
I-United Airlines eyalayo i-COVID-19 jab iya kugxothwa.
Abasebenzi beenqwelo moya abangaxolelwanga kwisitofu baya kubekwa kwikhefu elingenammiselo.
Kwimemo yenkampani ethunyelwe izolo, I-United Airlines ibhengeze ukuba bonke abasebenzi beenqwelo moya abafumana ukukhululwa kwezenkolo, ezonyango okanye ukukhululwa kugonyo lwe-coronavirus olunyanzelekileyo baya kuthunyelwa kwikhefu elingahlawulelwayo okanye lonyango ngokungapheliyo, ngaphandle kwesizathu okanye imeko yabo yokuxolelwa.
“Nje ukuba ubhubhane ubuye ngokuvakalayo, uyakwamkeleka kwiqela kwakhona,” abaqhubi beenqwelomoya, abagadi beenqwelomoya kunye nabameli beenkonzo zabathengi - abachazwe njengabasebenzi "kwindima ezijamelene nabathengi" - baxelelwa kwimemo.
United Airlines Abasebenzi abangasebenzisani ngqo nabakhweli, abanjengabathumeli noomatshini, abavunyiweyo ukukhululwa kuya kufuneka bavavanywe veki nganye kwaye banxibe imaski ngalo lonke ixesha xa besemsebenzini, kubandakanya naphandle.
Nabani na onikwe uxolelo kwezonyango uyakufakwa kwikhefu lezonyango lethutyana. Abo isicelo sabo sokukhululwa saliwa kuya kufuneka bathathe umpu wokuqala nge-27 kaSeptemba kwaye bagonywe ngokupheleleyo zingaphelanga iiveki ezintlanu okanye baphulukane nomsebenzi wabo ngokupheleleyo, ngokwememo ethunyelwe yi-VP yezabasebenzi uKirk Limacher.
Ulawulo lwe-United Airlines khange luchaze ukuba umntu ophetheyo angathanda kangakanani na ukunika izicelo zokuxolelwa, kwaye i-airline ayichazanga ukuba ifumene zingaphi.
I-United yayiyinqwelomoya yokuqala yase-US ukunyanzelisa igunya lokugonya le-COVID-19 kubasebenzi bayo abangama-67,000-plus, ekuqaleni kuka-Agasti. Ezinye iinqwelo-moya ziye zayeka ukuphelisa ukuhlawulwa kwabasebenzi abangagonywanga abavavanya intsholongwane. Delta Air Lines ubethe ngaphezulu kwe-200 yeedola kwiipremiyamu zononophelo lwempilo zabasebenzi abangagonywanga.
Iinkampani zase-US kunye neearhente zikarhulumente kunyanzelekile ngokusemthethweni ukuba zikhuphe ukuxolelwa kwizizathu zonqulo okanye zonyango, nangona kungenjalo kufuneka ubanike. Ulawulo lweBiden luye lwanyanzelisa ugunyaziso loluntu kunye nolwabucala njengoko inani le-COVID-19 amatyala e-US likhuphukile ehlotyeni.
Iinqwelo-moya, umqhubi wenqwelomoya kunye neemanyano zabahambi ngenqwelomoya bakwamkele ngolangazelelo ukwandiswa okucacileyo komyalelo wegunya lobuso, owamiselwa okokuqala ngoFebruwari kwaye ujonge ukuhlala iintsuku ezili-100.
I-United yeyesine ngobukhulu ngenqwelomoya e-US ngenani labakhweli, kodwa inesibini ngobukhulu bezithuthi kwaye isebenza kwezona ndawo ziya kuzo, ngokwezibalo zaphambi kobhubhane.